वेद र महिला « LiveMandu
वेद र महिला
८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०८:५९
पछिल्लो समयमा विश्वभरिनै वैदिक कर्ममा महिलाहरुलाई बर्जित गरिएको अनि सनातन संस्कारमा महिलाहरुलाई समानता नभएको तर्कहरु चलिरहेको छ । यसै तर्क अनि अल्पज्ञानलाई आधार बनाएर धर्म परिवर्तन, आलोचना अनि निकृष्ट वचनहरु हिन्दु सनातन परम्परा माथि लगाइरहेको अवस्था छ ।
आउनुहोस आज थोरै शास्त्रार्थ गरौं कि के साँच्चीकै सनातन संस्कारमा महिलाहरुलाई वेद पाठमा बर्जित गरिएकै हो त ? शास्त्रले के भनेको छ त ?
वेद पाठ गर्दा महिलाहरुको सन्तान उत्पादन क्षमतामा कमी आउने अनि भार पर्ने लगायतका फगत धारणाहरु ल्याइएको पाइन्छ जबकी यि कुराहरुमा कुनै सत्यता छैन् । वेदमा रहेको ताण्डेय ब्रह्मणा मन्त्र त झन महिलाहरुले मात्रै पाठ गर्नुपर्ने मन्त्र हो, वेदमा त्यस्तो कुनै प्रकारको लैगिंक भेदभाव छैन भनी ‘द हिन्दु टाइम्स’ले समेत पटक पटक प्रकाशीत गरेको छ ।
हरिद्वारको आचार्यकुलमका उपप्रधान आचार्य कृष्ण भट्ट स्वयंमले बिवाह पश्चात् आफ्नी धर्मपत्नीलाई वेद सिकाएको बताएका छन् । द हिन्दु टाइम्सलाई बताउँदै आफ्नी श्रीमतीले बिवाहपछि संस्कृत अनि वेद ज्ञानमा मास्टर्स अनि एमफील गरेकी स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार हरिद्वारको आचार्यकुलममा जुनै जात, धर्म या कुलका बालबालिका या बिधार्थीलाई पनि निसन्देह अनि समानरुपले वेद अनि संस्कृत सिकाइने गरिएको छ ।
उनका अनुसार वेद ज्ञानमा त झन वैज्ञानीक रुपमा ग्रह, दिशा, गुरुत्वाकर्षण अनि ब्रह्माण्डका बारेमा सिकाइन्छ । उता अर्थव वेदमा त झन नैरोग्यताका लागि बिभिन्न जडीबुटी अनि पद्धतीका प्रयोग पनि सिकाइन्छ । बिभिन्न अध्ययनहरुले पनि वैद्धिककालमै पनि महिलाहरुले समानरुपमा बेद अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसपछि इशापूर्व २००० बर्षमा आएको मनुस्मृती सुत्रका कारणले वेद अध्ययनमा केही सीमा कोरिएको या कोरिनगएको अनि गलत धारणाको बिकास हुन गएको भनि बिभिन्न अध्ययनकर्ताहरुले लेखेका छन् । मनुस्मृती र पुराणकै बिषयमा स्वामी बिवेकानन्दको धारणा जस्ताको तेस्तै प्रस्तुत गर्न चाह्यौं ।
मनुस्मृती र पुराणहरु थोरै ज्ञान भएका पुरुषहरुको ज्ञान सिमीतताको उपज हो । यिनमा धेरै अपव्याख्या, भेदभाव र त्रुटिहरु छन् । उपनीषद् र गीताहरु चाँही सत्य सनातन ग्रन्थहरु हुन् ।
‘शुक्ल यर्जुवेदा’ को २६ को २ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि पुरुष महिला दुबैका लागि वेद समान छ ।
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥
अर्थात जसरी मैले यि आशिषका शव्दहरु कुनै भेदभाव बिना भनें त्यसैगरि श्रोता या अध्यनकर्ताले पनि यी ज्ञानका बचनलाई हरेक पुरुष या महिलासमक्ष बाँड्नु । ति व्यक्तिहरु ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैष्य, शुद्र, विदेशी या अन्य ग्रहबाट आएका प्राणी किन नहुन् ।
महिलालाई सम्बोधन गर्दै महिलाहरु लाई कुनै पनि चुनौती या अफ्ठेराहरुले पराजय गर्न नसक्ने र महिलाहरुसँगको शक्तिले जस्तासुकै भयावह शक्तिलाई पनि पराजित गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । हजारौं मानव बरावरको सार्मथ्य एकै महिलाहरुमा हुने कारणले आफूसंग भएको शक्तिलाई जागृत र पहिचान गर्दे अगाडी बढ्न आग्रह गर्दछ । बिश्वले महिलावाट अदम्य साहसको अपेक्षा गरेको छ भन्ने अर्थ यस श्लोकले लगाँउदछ ।
उता अर्थव वेदकै ११ को ५ को ८ मा रहेको ब्रह्मचर्य शुक्तमा महिलाहरुले पनि आफूलाई पुरुष सरह बिधार्थीका रुपमा बिद्या आर्जनका लागि तयार हुन आव्हान गरिएको छ । यस शुक्तले महिला र पुरुषलाई समान अवसरका लागि पैरवी गरेको स्पष्ट पाइन्छ ।
यत्तिका आदर अनि सम्मानका साथ वेदमा महिलाहरुलाई देवीको स्थान दिइएको छ । एकएक गर्दै अध्ययन गर्ने हो भने समानता अनि सद्भावको लहर अनि स्रोतका रुपमा वेदलाई लिन सकिन्छ । महिलाहरुले वेद पाठ गर्न नपाउने कपोलकल्पित कुराहरु केवल भ्रम फैलाइएका मात्र हुन् ।
महिला अनि पुरुष दुबैलाई वैदिक ज्ञानको यो विशाल सागरमा स्वागत छ ।